लेखा, लेखा परीक्षण, करहरू | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: लेखा, लेखा, कर
कृपया मलाई भन्नुहोस्, एक कार्य, इनभ्वाइस र इनभ्वाइस को बीच के फरक छ?
के तपाइँ मलाई एक कार्य, एक चलानी र चलानी बीच भिन्नता के हो बताउन सक्नुहुन्छ? राजकुमारी सबै भन्दा राम्रो जवाफ, तर शौचालय कागज को बारे मा - धेरै कठोर। एक चलानी कागजात हो जहाँ यो लेखिएको छ कुन सामान / काम / सेवाहरूको लागि ...
रोयल्टी फ्रैंचाइजिङ के हो? उदाहरणको रूपमा
रोयल्टी भनेको के हो? उदाहरण को लागी माछा फ्रन्चाइजी को बारे मा, म अधिक जान्न चाहान्छु। मैले बुझें कि यस क्षेत्रमा त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छैन। वास्तवमा, त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छैन ...
कृपया मलाई भन्नुहोस्, अग्रिम रिपोर्टमा के पोष्ट गरिनेछ
कृपया मलाई भन्नुहोस् पोष्टिंगहरू अग्रिम रिपोर्ट D71 K51 मा के हुनेछ - खाता D60 K71 मा पैसा जारी गरिएको थियो - सामान (वा सामग्री) चेक D10 () 44) K60 मा भुक्तान गरियो - सामान (सामग्री) प्रविष्ट गरियो ...
खरिदमा वस्तुहरूको स्वामित्वको स्थान्तरण गर्नुहोस्
खरीददारलाई सामानको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्पत्ति बिक्रीको लागि कुनै पनि लेनदेनको निष्कर्षको उद्देश्य स्वामित्व र यस सम्पत्तिको डिस्पोजल गर्ने क्षमता प्राप्त गर्नु हो। कुन समयमा क्रेताले स्वामित्व अधिकार प्राप्त गर्दछ? ...
रिटर्न कर कटौती फिर्ती फिर्ता दाखिल भएपछि कति?
ट्याक्स रिटर्न ट्याक्स कटौती भैसके पछि कति दिन सकिन्छ? कर कटौतीको लागि कागजातहरू २ प्रतिहरू पेश गरिन्छ। एउटा कर कार्यालयमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्, र दोस्रो तपाइँको आगमनको बारेमा नोटको साथ रहनेछ।
अडिट फर्महरू। लेखा परीक्षा फर्महरू के गर्छ, उनीहरूको कार्य के हो?
अडिट फर्महरू। अडिट फर्महरूले के गर्छन्, उनीहरूका कार्यहरू के हुन्? http://akfpartner.ru/auditorskie-uslugi त्यहाँ एक धेरै चाखलाग्दो साइट छ जहाँ तपाइँ तपाइँको जिज्ञासु प्रश्नको उत्तर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ ... यस साइटमा तपाइँले गर्न सक्नुहुन्छ ...
अकाउन्टिंग प्रश्नसेप्ले सरल पोस्टिंग मूल्य
लेखांकनको बारेमा प्रश्न, सरल भाषामा पोष्टिंगको मूल्य बुझाउनुहोस् १) डीटी .1२.०२ केटी .62.02२.०१ - .62.01२.०२ प्रीपेमेन्ट (अग्रिम) लाई ध्यानमा राखिन्छ, र .62.02२.०१ मा - खरीददारको प्राप्यता। यो वायरिंग द्वारा गरिन्छ ...
कसरी व्यक्तिगत आय कर तिर्ने? कर कसरी गणना गरिन्छ, कहिले भुक्तानी गर्ने?
कसरी व्यक्तिगत आय कर तिर्ने? कर के गणना गरिएको छ, कहिले तिर्ने? सबैजना जस्तै, यो आवश्यक छ कर्मचारीहरू दिनको बजेटमा राख्न र हस्तान्तरण गर्न ...
सम्बद्ध खाता के हो? केवल सरल भाषा भाषा।
एक अफसेटिंग खाता के हो? केवल साधारण रूसीमा। ल्युडमिला दिमित्रीभाना, तपाईंले सबै कुरा स्पष्टसँग वर्णन गर्नुभयो, धन्यवाद! यो दुखको कुरा हो कि तपाईं मेरो बू प्रशिक्षक हुनुहुन्न। संस्थान मा लेखा! अन्तर्क्रिया ...
उद्यमशीलताको उद्देश्य के हो? o लाभ निकासी o सेवा को प्रावधान o सूचना समर्थन
व्यापार को उद्देश्य के हो। o नाफा कमाउने o सेवाहरूको प्रावधान o सूचना समर्थन चार्टर हेर्नुहोस्, सबै व्यावसायिक संगठनहरूका लागि - नाफा कमाउने, गैर-व्यावसायिक संगठनहरूका लागि - लक्ष्यों को कार्यान्वयनको लागि, ...
के SP को दर्ता गर्दा UTII को लागी आवेदन गर्नु पर्छ?
के मैले एकल उद्यमी दर्ता गर्ने बित्तिकै UTII का लागि आवेदन दिनु पर्छ? कर प्राधिकरण संग पंजीकरण पछि days दिन भित्र सरलीकृत कर प्रणाली को लागी एक आवेदन बुझाउनुहोस्। र जब तपाईं भित्र पस्ने गतिविधि सुरु गर्नुहुन्छ ...
ईन्भेन्टरी हो…। एक सय प्रतिशत In इन्वेंटरी हो: actual. निश्चित मितिमा लेखा डाटासँग तुलना गरेर वास्तविक सम्पत्ति र वित्तीय दायित्वहरूको स्पष्टीकरण। ITEMS3"... १। प्रदान गर्न ...
कार्यरत पूंजीको रिलीज रकम उनको त्वरणको परिणामस्वरूप, कसरी निर्धारण गर्ने?
उनीहरूको त्वरणको परिणाम स्वरूप कार्यशील पूंजीको जारी रकम, कसरी निर्धारण गर्ने ?? कार्यशील पूंजीको कारोबारका संकेतकहरूको तुलनाले तपाईंलाई यसको गति र मन्दी निर्धारित गर्न अनुमति दिन्छ। एक निरपेक्ष रिलीज तब हुन्छ जब चालू वर्षमा सर्कुलेटको मात्रा ...
उत्पादनको बिक्रीबाट वित्तीय परिणाम कसरी निर्धारण गर्ने? D-90, K-99
उत्पादनहरूको बिक्रीबाट वित्तीय परिणाम कसरी निर्धारण गर्ने? D-, ०, K-account finished लेखा र प्रतिबिम्ब को एक उदाहरण समाप्त उत्पादनहरु को बिक्री को कर को लागी। उत्पादको स्वामित्व यसको हस्तान्तरण डेबिटको समयमा खरीददारलाई पारित गरियो ...
मलाई बताउनुहोस् सबकेन्टो के हो?
सबकन्टो भनेको के हो? एनालिटिक्स। उदाहरण को लागी, खाता १० - सामग्री, सबकन्टो - स्टक, कच्चा माल, आदि मा एक स्प्रेड मा Subconto - एक विश्लेषणात्मक सूचक जसले तपाइँलाई पहिले अज्ञात अनुसार खाता डिसेफर गर्न अनुमति दिन्छ ...
क्यासेट खोल्न र सामान किन्नको लागी पैसाको बारेमा तपाईलाई कति चाहिन्छ?
तपाईलाई कति पैसा चाहिन्छ स्टाल खोल्न र सामान किन्नको रकमको बारेमा? मेरो एक परिचितले चेल्याबिन्स्कमा एउटा सानो कियोस्क भाडामा लिए। उद्घाटनले १०० हजार रूबल लिए। , त्यसपछि थप ...
मलाई भन्नुहोस्, थोक र खुदराबीच के फरक छ?
मलाई भन्नुहोस्, थोक र खुद्रा बीचमा के भिन्नता छ? क्रेतामा कानुनमा थोक-खुद्रा को अवधारणा छैन। त्यहाँ एउटा विवरण छ कि खुद्रा तपाईंको आफ्नै उपभोगको लागि सामानको बिक्री र खरीद हो। थोक अन्तिम खरीदको लक्ष्य बिना नै खरीद हो, साथ ...
यसका लागि क्यान्सरको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? कहिले तिर्न? अवकाश z / p को लागि बयानमा हुनुपर्छ
छुट्टी भुक्तानीबाट आर्जित व्यक्तिगत आय कर? कसरी पोष्टिंगहरू सही तरीकाले बनाउने? कहिले भुक्तान गर्ने? छुट्टी भुक्तानी तलब को लागी वा व्यक्तिगत छुट्टी भुक्तानी को लागी व्यक्तिगत आय कर को बिज्ञापनमा हुनुपर्दछ छुट्टी को भुक्तानी को जारी को समय मा हस्तान्तरण गरिएको छ, तपाईं एक खर्च खाता लेख्न सक्नुहुन्छ, एक जान्छ भने ...
सूचक मूल्य के हो?
सic्केतात्मक मूल्य के हो? म यो बुझ्दछु जब मूल्य स्थिर छैन सूचक मूल्य भनेको तल मूल्य हो जुन निर्यात गर्दा सामान बेच्न सक्दैन। सूचक मूल्य भनेको वस्तुको लागि मूल्य हो ...
हेलो! म जान्न चाहन्छु कि एक रेस्टुरेन्टमा एकाउन्टेन्ट क्यालकुलेटरको कर्तव्यमा के समावेश छ, कुन कार्यहरू गर्नु पर्छ?
हेलो! म जान्न चाहन्छु कि एक रेस्टुरेन्टमा एकाउन्टेन्ट क्यालकुलेटरको जिम्मेवारी के हो, यसले कुन कार्यहरू गर्नुपर्छ? तयार र बेचेका उत्पादनहरूका लागि गणना कार्ड कोर्नुहोस्। धेरै श्रम र जटिल व्यापार। यो सत्य हो, अब त्यहाँ विशेष छन् ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 29 अर्को पाना
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,588 प्रश्नहरू।